Phineas 5 months ago
That woman is a political ghost her career died the moment she joined a zanu pf puppet party
Iiiiihhhhhh Mai imi siyanai nesu.NHM,hatidi naye.Nero haasisiri weMdc,bt ava wevanhu.Tisu takumuudza wekutaura naye,uye wekubatana naye.So Mai imi hatikudii padhuze nemunhu wedu.Asifuni sibili sibili.
Pipi 5 months ago
Sha kuphe dzokera kwawakamamwa
Iiiiii Saka pakatoipa ask kpe go back to ZANU
I don't think it's a wise idea to let her rejoin MDC A. I smell a rat🤔🤨😥😯
Davison Mitsubishi 5 months ago
Dokota Khupe vakazvi parira vega. Vanhu ve MDC Alliance havacha ku trusteryi manje.
kambwa 5 months ago
Vax 5 months ago
Matambudziko ose Ari muMDC A akakonzerwa naKhupe saka mkomana ngaangwarire Matebeleland yagara yakasimba vana Welshmen Ncube madhara edu saka Khupe ngaaende hake kuZanu PF
Mukomana ngaangwarire vanhu vari politically confused. Asi chokwadi Khupe kana achida kuenderera mberi ne politics ngaadzokere ku MDC Alliance.
Regai chokwadi zvinzi politics is a Dirty Game. Pamwe Khupe has realised kuti aingo respectwa ari ku MDC Alliance. Saka ngaasiyane nezve kuda kutora nzvimbo ya Chamisa. Nekuti Mukomana muhombe. Kubvira kudhara ari ku University. Mugabe akaiona nhamo yacho pa Munhumutapa Building.
Sure Beware 💀 Nelly with Madam Doctor Ava, you are ok without HER
Remember the Mass is with you
I POVO Madam Ava Nana Douglas
People of various opinion (povo)
🤠🤠🤠 MASS for CHAMISA 🤠🤠🤠
There are know permanent friends in politics
@Jombo:Dai mangonyora shona/ Ndebele. Manje chirungu chamanyora chichakonzera kuti vanoda kuenda kuUK vachanzi chimbomirai fourth wave yecovid19( omicoron) yakanyanya kuZimbabwe
Shona/Ndebele bhoo futi
Rangaridzo 5 months ago
If true and Nero akangobvuma chete kugara pasi even for a minute with this woman zvadhakwa.
Hazvidhakwi, hanzi na Jombo( There are know permanent friends in politics). Simple, there are neither permanent friends nor enemies in poliltics
A snake only sheds it's skin to become a bigger snake inyoka uya akadzoka anosviko konzeresa and destroy MDA Alliance from within maZanu tactics hamusati makuaziva nanhasi vanhu havadzidze
Togarepi 5 months ago
That woman is very dangerous chikonama should get rid of her,she openly said she is in politics because of money so becareful